တရုတ်မိုးရွာသည့်ပေါ့ပါးသည့်တောင်တက်အိတ် 25L အမျိုးသားအမျိုးသမီးများအတွက်ထုတ်လုပ်သည့်အပြင်စက်ရုံအပြင်ဘက်တောင်တက် Daypack ခရီးသွားကျောပိုးအိတ် | နယူးမုဆိုး
ရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာ
ကျိုးကြောင်း / ခရီးသွားကျောပိုးအိတ်
စလင်းအိတ် / Messenger ကိုအိတ်
မိုးရွာရွာသောပေါ့ပါးသည့်တောင်တက်အိတ် ၂၅L အမျိုးသားအမျိုးသမီးများအတွက်အပြင်ဘက်တောင်တက် Daypack ခရီးသွားကျောပိုးအိတ်
ပစ္စည်း NO .: HT63065
ပစ္စည်း အောက်စဖို့ 600D
အရွယ်အစား: 27 × 20 × 49cm / 10.6 X ကို 7.8 X ကို 19.3 လက်မ
အရောင်：အစိမ်း； အပြာ； အနက်ရောင်； အနီရောင်
အလေးချိန် 400 ဂရမ်
FOB XIAMEN စျေးနှုန်း: $ 12.5-14.5
ပို့ဆောင်ချိန်: ပတ်ပတ်လည် 45-55 ရက်
တင်ပို့ရာအရပ်: ဖူဂျီ, တရုတ်
မူလနေရာ ဖူဂျီ, တရုတ်
၂၅ လီတာနှင့်အိတ်ဆောင်အမြောက်အများပါ ၀ င်သောအဓိကအခန်း ၁ တွင် ၂ လီတာဆီးအိမ်အတွက် (ဆီးအိမ်မပါ ၀ င်ပါ) သီးခြားဆီးအိမ်အိတ်တစ်ခု၊ အမြန်သွားနိုင်သည့်ရှေ့အိတ်ကပ်၊ ဇစ်များ၊ သံခမောက်အဖုံး၊ အိတ်ကပ်နှစ်လုံးပါရှိသည်။ လိုအပ်တယ်
အမျိုးသမီးများတောင်တက်ကျောပိုးအိတ်၊ ရေညှိချိန်ညှိထားသောရင်ဘတ်သိုင်းကြိုး၊ တင်ပါးဆုံရိုးများကြောင့်ရေစီးရေလာစနစ်သည်ပြီးပြည့်စုံစေသည့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်လေဝင်လေထွက်သက်သာစေခြင်းအတွက် Breathable Mesh padding၊ ကျောပိုးအိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ကျောကိုအံဝင်ခွင်ကျသာမကသင့်ကိုကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ပေးနိုင်သည်။ အမြန်ကားမောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်တယ်။
စက်ဘီးခမောက်ကိုသယ်ဆောင်ရန်ကြိုးနှင့်အတူသံခမောက်လုံးတပ်ဆင်ထားသည့်အိတ်ဆောင်။ ရေကျောပိုးအိတ်၏ရှေ့မှောက်တွင်ရောင်ပြန်ဟပ်သောအရာများသည်ညအချိန်တွင်လမ်းလျှောက်သောအခါသို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးနေစဉ်မြင်ကွင်းနှင့်လုံခြုံမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ထို့အပြင်ရင်ဘတ်သိုင်းကြိုး၏ဆက်သွယ်မှုသည်အသက်ကယ်သမားပီပီဖြစ်ပြီးတောင်တက်သမားများနှင့်စက်ဘီးစီးသူများအတွက်အပျော်ရွှင်ဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။
စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စွန့်စားခန်းစသည်တို့အတွက်စက်ဘီးကျောပိုးအိတ်သည်တစ်နေ့လုံး (သို့) နေ့ချင်းညချင်းရေစီးရေလိုအပ်ချက်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအဖော်တစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်။
မှတ်ချက် - သံခမောက်နှင့်ရေစုပ်စက်တွင်မပါ ၀ င်ပါ။
အခါအားလျော်စွာ: တောင်တက်ခြင်း၊ စခန်းချခြင်း၊ အမဲလိုက်ခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့်အခြားပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ။
ရှေ့သို့ Hunter အမျိုးသမီးများအတွက်ရေစိုခံအိတ်၊ ပေါ့ပါးခြောက်သွေ့သောအိတ်လွယ်အိတ်၊ ခရီးသွားခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ လှေစီးခြင်း၊
ကြီးမားသောကျောပိုးအိတ် Outdoor Sports Bag 3P Military T ...
Outdoor Sports Bag 3P စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအိတ်များ ...
G4Free 40L Rucksack ခေါက်သိမ်းနိုင်သောတောင်တက်ကျောပိုးအိတ် ...
60L အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအတွက်ကျောပိုးအိတ် Daypack အမျိုးသမီး ...
အသစ်သော 50L & 60L အပြင်ဘက်ကျောပိုးအိတ်စခန်း Cli ...
Camo နည်းဗျူဟာကျောပိုးအိတ်စစ်တပ်ကြည်းတပ်တောင်တက် ...
Yingbin အရှေ့လမ်း၊ Chengnan စက်မှုဇုန်၊ Hui'an နိုင်ငံ၊ Quanzhou၊ Fujian, China
ဖုန်း 86-595-87351963, 86 (0) 18876215427